Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.4.1.2 Friendship inotungamirwa pavadzidzi
Vatsvakurudzi vaishandisa e matanda uye okutarisira zvinyorwa kunzwisisa ushamwari inotungamirwa. Tsvakurudzo iyi zvinoda chokuita incompleteness pamusoro mashoko makuru.
Mumamiriro ezvinhu mazhinji, vatsvakurudzi havana rombo rakanaka zvakakwana kuti zvose zvavanoda rwoga inounganidzwa panzvimbo imwe. matambudziko maviri nevakawanda kukwana ruzivo pamusoro pavanhu uye mismatch pakati yokungotaura constructs uye mashoko. Vose matambudziko aya akaidamwa Kossinets uye Watts (2009) sorutivi Vachiedza kunzwisisa sei magariro network ichishanduka.
Nehasha kutaura, vaongorori vanofunga kuti pasocial network shanduka kunodzorwa zvinhu zvitatu: 1) chimiro yaivapo ukama 2) vaiita mabasa (semuenzaniso, dorms, makirasi) uye 3) Demographics. Kunzwisisa interrelationships pakati izvi zvitatu zvinokonzera kunoda longitudinal rezvebonde Data pamwe mashoko pamusoro nevanhu 'Demographics uye mabasa. Zvidzidzo yapfuura akanga zvimwe izvi features, asi hapana akanga zvose zvitatu.
Kossinets uye Watts akatanga kutsvakurudza dzavo pakuwana email matanda kubva yunivhesiti guru. Zvisinei, izvi tsambambozha matanda chete vakanga kukwana, havaiti inosanganisira zvose zvinodiwa kunzwisisa siyana zvinokonzera achityaira zvakarukwa shanduka. Naizvozvo, Kossinets uye Watts zvibatanidzwe izvi e matanda, pamwe nemamwe mabhuku maviri mashoko: mashoko wevanotungamirira inounganidzwa kuburikidza yunivhesiti uye pamusoro vakagoverana zvinhu (semuenzaniso, mudzidzi dzokugara mashoko uye mazita zvakakwana anyorese kosi) mashoko. Kamwe izvi mabhuku matatu mashoko, rimwe nerimwe raiva kukwana, vakanga zvibatanidzwe pamwe Kossinets uye Watts aiva simba mashoko chivako kunzwisisa zvakarukwa shanduka.
Asi, paiva nomumwe kwokupedzisira nedambudziko kuti vaifanira kukurira. Kossinets uye Watts aida kudzidza kuti pasocial network iri yunivhesiti iyi kumhuka saka vaida nzira yokushandisa email matanda ive yera akanga zvakabatana kune uyo panguva iyoyo. Sezvakakurukurwa munyaya yakapfuura (Section 2.3.2.1), pamusoro operationalization pamusoro yokungotaura constructs mhando iyi kwakaoma guru paaishandisa digitaalinen zvisaririra kuti mumagariro tsvakurudzo. Pakupedzisira, Kossinets uye Watts akasarudza kuti vanhu vaviri vaionekwa zvakabatana nenguva \_ (T \_) kana chete kana vakanga vakatsinhanisa na (\_ (i \_) emailed \_ (J \_) uye \_ (J \_) emailed \_ ( ini \_)) yapfuura mazuva 60. Sarudzo idzi havana kuchengera; vakanga yakavakirwa Tikanyatsoongorora ichi empirical ezvinhu, uye Kossinets uye Watts akaongorora kuti migumisiro vavo vaiva nesimba kuti sarudzo idzi. Kazhinji, kana operationalization yako kunosanganisira kusarudza vamwe dzakananga cutoffs-vanoti mazuva 60 pane mazuva 30 kana 90 Mazuva-chinhu chakanaka pfungwa nechokwadi chokuti migumisiro vako havasi nehanya sarudzo iyi.
Kamwe Kossinets uye Watts akagadzirisa chinetso chacho anokonzerwa incompleteness (semuenzaniso, kushayikwa wevanotungamirira mashoko, kushayikwa ruzivo pamusoro vaiita basa, uye kushayikwa yokungotaura constructs), vakanga Data kuti vakwanise kunzwisisa masimba makuru matatu anogona kutyaira rwomumbure shanduka: 1) maumbirwo yaivapo ukama 2) vaiita mabasa (semuenzaniso, dorms, makirasi) uye 3) Demographics. Inoenderana tsvakurudzo yapfuura, vakaona kuti vanhu zvakafanana Demographics vangangowedzera kuumba ukama. Zvisinei, kusiyana zvidzidzo kwokutanga, vakawana kuti muenzaniso uyu zvakasimba mitigated nokuda raivapo zvakarukwa mamiriro uye vakagoverana zvinhu. Nemamwe mashoko, nomufananidzo vatsvakurudzi adarika vaona akanga zvishoma akatsanangura mashoko kuti vaongorori vamba vasina. Saka, nokuda kubudirira chokuita incompleteness pamusoro mashoko avo, Kossinets uye Watts vakakwanisa kujekesa kudyidzana dzakasiyana-siyana-siyana kudzinga pasocial network evolutions.